Qaraxyo gaadiid looga gubay AMISOM iyo Weerar lagu qaaday ciidamada Dowladda oo ka dhacay deegaanno katirsan Sh/Hoose.
Saturday June 29, 2019 - 09:18:44 in Wararka by Super Admin
Qaraxyo iyo weeraro kala beegsaday ciidamada Shisheeye iyo maleeshiyaatka DF ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah gobolka Sh/hoose sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogeyaal ah iyo ilo wareedyo kala duwan.
mid ka mid ah weeraradan ayaa ahaa dagaal toos ah oo lagu qaaday saldhig maleeshiyaatka DF ay ku leeyihiin deegaanka Ceel Saliini ee duleedka magaalada Marko waxaana weerarkan oo dhacay saaka subixii la sheegay in khasaare kala duwan lagu gaarsiiyay maleeshiyaatkii halkaas ku sugnaa.
Meel kale oo ah wadada u dhexaysa Afgooye iyo Wallaweyn ayaa la sheegaya in qarax aad u xooggan oo miinooyinka dhulka ah uu ka dhacay kaas oo lala eegtay kolonyo ciidamo Afrikaan ah oo kusoo jeeday dhanka magaalada Muqdisho, waxaana ilo wareedyo iyo dad goob joogeyaal ah ay sheegeen in qaraxaas lagu gubay gaari Xamuul ah oo ka mid ahaa kolonyada ciidamada Shisheeye.
Gaariga la qarxiyay ayaa xambaarsanaa Konteenar waxaana uu qeyb ka ahaa kolonyada la weeraray oo wararka qaar ay sheegayaan inay zaad geeyeen saldhigyada Afrikaanta ee safka hore islamarkaana dib uga soo noqdeen.
markii ay ka dhaqaaqeen halka lagu qarxiyey ayey sidoo kalen la kulmeen qarax kale oo aad u xooggan kaas oo lala eegtay gaari Taw ah oo ay la socdeen ciidamo fara badan, wararka ayaa intaas ku daraya in Gaarigu uu gabi ahaanba burburay halka wixii saarnaana ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen goobta.
Taliban oo Weerar Cagmarin ah ka fulisay Waqooyiga Wadanka Afghanistan.